Ungasiguqula kanjani isicelo segalari esizenzakalelayo se-Android | Izindaba zamagajethi
Ungalushintsha kanjani uhlelo lokusebenza lwegalari elizenzakalelayo le-Android libe yi-QuickPic
Namuhla sikulethela uhlelo olusha lohlelo lokusebenza lwe-Android uma ngabe Uhlelo lokusebenza lwegalari okuza ngokuzenzakalela lolu hlelo alukukholisi. Kuyacaca ukuthi izinhlelo zokusebenza ezizenzakalelayo zifakiwe ezinhlelweni zokusebenza zamadivayisi wethu weselula azihlali zikhonzwa yibo bonke abasebenzisi.
Okwabo bonke abasebenzisi abangakhululekile ngohlelo lokusebenza lwegalari ye-Android, Sethula enye indlela ezizibiza nge-QuickPic.
Uhlelo lwe-QuickPic lungenye indlela ezosivumela ukuthi siphathe izithombe namavidiyo esiwathatha ngomakhalekhukhwini wethu osebenza ngohlelo lokusebenza lwe-Android. I-QuickPic isivele ikwinguqulo 4.0 futhi iyatholakala ukulanda mahhala ku-Google Play Isitolo.
Lolu hlelo lokusebenza luhambisana ne-100% namadivayisi eselula afakwe isistimu ye-Android kusuka kunguqulo yayo yesibili. Kulesi sicelo uzokwazi ukwenza amakhophi wesipele wezithombe zakho efwini esilibonisayo. Futhi inokusekelwa kwesigcawu sefolda esheshayo, amandla wokuhlunga amafolda ngosayizi noma ukusekelwa kwama-akhawunti we-Google wokungena ngemvume.
Ngakho-ke manje uyazi, uma ukhathele noma ukhathele uhlelo lokusebenza lwegalari kudivayisi yakho yeselula futhi ufuna ukunikeza uhlelo lwakho umoya wentsha, landa uhlelo lokusebenza lwe-QuickPic futhi iqala ukuphenya ukusebenza kwayo, ngoba njengoba sibonile, yenza izenzo eziningi kakhulu kunalezo ezizenzakalelayo ohlelweni.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Ungalushintsha kanjani uhlelo lokusebenza lwegalari elizenzakalelayo le-Android libe yi-QuickPic
Leli khasi elihlekisayo okuwukuphela kwento eliyenzayo ukukhangisa uhlelo lokusebenza.Ikuphi inqubo ukuze izinhlelo zokusebenza ziyeke ukukhombisa inketho yokulayisha izithombe ngegalari ezenzakalelayo kepha futhi zibonise i-quickpic?
Ama-Cydia Tweaks aphezulu we-15 we-iOS 8 (Ingxenye 3)
I-8D ye-3D XNUMXK ye-Samsung ebabazekayo